Nwere Instagram na Social Media Ruined Travel? | Otu Di na Nwunye
Nwere Instagram na Social Media mebiri Travel?
Anyị nọ na Chichen Itza mgbe ọ kụrụ m. Mụ na Tracy na-achọkarị ịga na mpaghara Yucatan, na-aga ebe nnukwu ihu obodo Maya nwere ike buru nnukwu alaeze, ma n'ebe ahụ ka anyị nọ. Anyị guzoro nso dị ka anyị nwere ike isi na pyramid bụ isi El Castillo (ma ọ bụ karịa nke ọma, The Pyramid of Kukulkan), ma were ọtụtụ n'ime ihe owuwu, ọdịdị, nha, na naanị ike dị ka anyị nwere ike. N'iburu onwe m, ana m elegharị anya, na-ahụkarị ihu na ihu onye ihu mgbe ha hụrụ ihe na-agbanwe ndụ n'ezie - ma, ahụghị m nke ọ bụla.
Mmadụ mgbe ọ bụla gasịrị, otu mgbe otu agbakọta gbara akara akara ngosi a, ọ bụghị otu onye na-ele ya anya. Otu ìgwè gbalịrị iwepụ ihe ndị ahụ "na-ese foto-na-na-n'etiti-ikuku-mgbe-i'm-jumping" foto, na-agbagharị iPhone ha site na akara ruo mgbe ha nwere ọhụụ ha nke ihe aghọwo ihe nkuzi Instagram.
N'ịga n'ihu n'ụzọ, ma ka dị nso na pyramid ahụ, otu di na nwunye na-atụgharị uche na foto ha tupu m nụ ka nwa okorobịa ahụ kwuru, "ọ dị mma, ka anyị nwaa ọzọ .... mee mkpịsị aka gị a oge a ... "Anaghị m ama ihe ọ na-ede. Obere obere ndi mmadu gbara gburugburu nnukwu ulo akwukwo ukwu Mayan mgbe ikpe na - acho. Ọ bụ otu ihe ahụ ka anyị na-agafe Ụlọ Nsọ nke Ndị dike, n'oge a ka m nụrụ ka mmadụ na-ekwu, "Echere m na ọ bụ buru ibu, "Tupu ya arịọ enyi ya ma ọ bụrụ na ọ dị njikere iri nri.
"Ndi a ihe anyị meworo? "Enweghị m ike icheta, ma ọ ga-abụrịrị na m kwuru ya n'eleghị anya. Mụ na Tracy nwere ogologo mkparịta ụka mgbe e mesịrị n'ehihie ahụ, ọ bụ ajụjụ m nọ na-eche kemgbe oge ahụ - nwere mgbasa ozi ọha na eze, karịchaa, Instagram, njem na-emebi?
Ugbu a, abughi m "mbibi" iji mee ihe efu dika agwo. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na anyị echefu ihe banyere ihe ijuanya, ma ọ bụ nke na-agbagharị agbagọ, ebe ọ bụ na anyị na-eji ihe ntanetị nke onye ọ bụla na-atụgharị uche site na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka afọ iri gara aga?
E wezụga nke a, ànyị na-eche nsogbu nsogbu gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na nsogbu dị iche iche na-esi na ya pụta?
Anyị nwere obi ụtọ gbasara Instagram.
Ihe malitere dị ka ihe na-atọ ụtọ maka ikpa foto foto na-adịghị mma site na ndị enyi na-abụrịrị ihe na-eri nri maka nnukwu anụ nke ọdịmma onwe onye. Onye ọ bụla, o yiri ka ị ga-eche, ọ bụ ma ama ma ọ bụ na njedebe nke ịghọ onye na Instagram.
Eziokwu bụ, ikpo okwu bụ ihe dị mkpa maka ndị na-ede blọgụ dị ka onwe anyị. Ụdị, ndị mmekọ, na ndị na-ege gị ntị na-atụ anya na ị ga-enwe ọnụnọ na Instagram, na ịghara inwe otu bụ n'ụzọ ụfọdụ iji kweta ịkwadoghị iwu. Enwere otutu nde ihe na - ezighi ezi na Instagram - sitere na disarsoous algorithm nke na - achota onye obula nke oma karia ihu akwukwo ndi enyi ha na akwukwo nke ndi ha chotara ihe di nma, ihe ndi di mkpa nke na - achoputa onu ogugu na - ihe na-eme ka ọ dị mfe ịba ma ọ bụ na-emehie. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe kachasị njọ bụ ihe Instagram mere ka ndị njem na-eme.
Ị maara na ọtụtụ ndị ọzọ - karịsịa Millennials and Generations Z'ers - n'ezie họrọ oge ezumike ha dabere na Ntuziaka nke ebe? N'eziokwu, banyere 40% nke ndị nọ n'okpuru afọ 33 akpọ ụlọ ahịa Instagram dị ka ihe dị mkpa na nhọrọ ha ebe ha ga-aga.
Ọ bụghị nri.
Ọ bụghị akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụghị omenala.
Ha na-adabere ezumike ha n'ụdị ụdị ọkwa ha nwere ike ịnweta na Instagram.
Ugbu a, ọ ga-adịrị m mma ikwu na ịchọrọ itinye aka na mgbasa ozi na-ezighị ezi - M pụtara, anyị bụ ndị na-ede blọgụ. Ọ dị mma ịmepụta ọdịnaya, hapụ na site na ụfọdụ channel (Instagram ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ), na-enwe obi ụtọ site na ọkwa nke ewu ewu na ọdịnaya na-enweta.
Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ilekwasị anya bụ ịkwanyere isiokwu ahụ ùgwù. Anyị na-elezi anya nke ọma na ihe anyị tinyere na Instagram na-asọpụrụ ebe anyị na-eleta, na-adọrọ uche gaa n'ihe dị mma banyere ebe ahụ - ma ọ bụ otu ihe, efere, onye obodo, ma ọ bụ ihe nwere mmetụta nke ebe. Ntuziaka Instagram anyị, ị ga-ahụ, enweghị ọnụnọ anyị na ọtụtụ foto.
Nke ahụ bụ maka ihe kpatara ya.
Nsogbu na Instagram bụ mgbe ebe dị egwu dị ka Cenotes nke Yucatan, Pantheon, na Acropolis nke dị na Athens na-ebelata nanị azụ azụ maka foto foto ndị ga-adị mma. Mgbe anyị na-eme njem, anyị chọrọ ịmepụta ọdịnaya na-akpali ị ịga njem - ọ bụghị ọdịnaya nke onwe-aggrandizing.
N'ikwu eziokwu, ụdị akwụkwọ mgbasa ozi nke ọma na ụwa nke njem abụghị banyere onye njem - ọ bụ maka ebe.
Instagram na-akwado otu ọkwa nke disingenuity nke na-efe efe na ihu nke nyocha na njem n'ezie pụtara, ma ọ bụ ndị njem na-agbanwe agbanwe. Ahụla m ọtụtụ ihe atụ nke ndekọ ọnụ ọgụgụ influencer - ndị na-eso ụzọ, mmasị, na nkọwa - iji ụgbọala na-ewu ewu nke ụlọ ọrụ Instagram nyere. N'ezie, enwere m otu nnukwu njem njem n'izu na-enweghị mmụba, naanị iji mụbaa ụmụazụ 5k n'otu ụbọchị. Mgbe izu ole na ole na-enweghị ọganihu, n'ikpeazụ, ụfọdụ doro anya dobe na ndị na-eso ụzọ na-agụ banyere 2k, akaụntụ ahụ kwụsịrị 5k n'otu ụbọchị.
Ọ bụ na ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na-eche na ndị niile na-amasị na ihe ndị ọzọ bụkwa ụgha? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe ahụ, kedu ụdị brands na-akwụ ụgwọ, n'ụzọ ọ bụla? Ha maara banyere ọrịa ahụ? Ndị na-anụ ọkụ n'ahụ hà maara na ime nke a ka a na-akwụ ụgwọ dị ka ndekọ ọnụahịa gị bụ nkọwa zuru oke nke na-ezu ohi?
Mgbe ọ bụla onye njem na-eme nke a, ha na-agbaso usoro ahụ site na iji usoro na-akwadoghị nke na-eme ka onye na-ajụ anyị jụrụ na ahụmahụ njem. Ekwenyesiri m ike na ị chọpụtala ndị niile na-ebugharị "Foto dị mma bro! 100!"Na-ekwu na anyị na nri gị jupụtara na jupụtara. Ọ na-eme ka anyị chọọ ịgụ, ikwu eziokwu.
N'oge niile, ka ị na-agbalị ma na-eme njem gaa na ibe gị site na iji arụmọrụ ziri ezi n'elu ikpo okwu, ị na-ejikarị otu foto ndị dị na otu ebe na - karịa oge - ịchọrọ ịtọ ntutu isi gị. Ana m enweta onwe m na-echekarị, "ọ dị njọ, ma ọ bụrụ na m hụ otu foto nke otu nwa agbọghọ na-eduga enyi nwoke (onye na-apụ mgbe niile) site n'aka na n'ime mmiri mmiri, m ga-amanye onwe m n'ihu!"
Nke a na - eduga - enweghị mmasị. Ozugbo ị na-aga ebe na-aga ma hụ ya na-enweghị na-ese onyinyo ya na Photoshop, na-enweghị kpakpando ọhụụ ọ bụla e tinyere na mbara igwe, na-enweghịkwa ìgwè ndị ọzọ na-eme njem nleta bụ ndị na-akpali akpali dị ka ị na-ahụ foto ndị dị adị Instagram (ha na-anwokarị Photoshopped, kwa), ị na-eche onwe gị, "meh - ọ bụghị nke ahụ dị mma."
Ahụmịhe anyị na-eme na-adịchaghị ntakịrị n'ihi na e meela ka anyị nwekwuo ahụmahụ, kama ịgagharị ụwa "ọ fọrọ nke nta" - nke bụ n'ezie ọ bụghị ezigbo ahụmahụ.
Nnukwu njem nleta
Ugbu a, enwere nsogbu nke a, nke mbụ na ọtụtụ ebe, n'ime iri afọ gara aga, hụrụ mmụba na-enweghị atụ nke njem nleta, na-ejikarị mbipụta nke ihe mere ahụmahụ ịmalite. Ebe dị ka mpaghara Yucatan, Machu Picchu, na ndị njem nleta na Iceland na-egbu ndị na-adịghị ebe ahụ na-enwe mmetụta nke ike nke ebe ahụ, na-enwe obi ụtọ na ya akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ ịchọpụta nri dị ịtụnanya.
Ha nọ n'ebe ahụ amasị.
Ugbu a, n'eziokwu, anyị so na nsogbu ahụ. Dị ka ndị na-ede blọgụ na njem, oge ọ bụla ị hụrụ otu n'ime foto anyị na Instagram ọ nwere mmetụta, ụfọdụ n'ime ebe anyị na-aga ma na-edegharị akwụkwọ bụ ụfọdụ n'ime ebe ndị ahụ na-agba mgba na njem. Dịka anyị na-ahụ maka ọdịbendị, iji weta ebe nke gị, ma mee ya banyere ebe (ị nwere ike ịhụ na ole na ole n'ime foto anyị na-etinye anyị n'ime ha), anyị maara na anyị anaghị emecha kwụsị.
Ebe ndị mmadụ na-eme njem nlegharị anya dị ka Venice na Barcelona ekwuwo banyere mmetụta nke njem na obodo ha mara mma - ebe mmetọ na-aga n'ihu na-agbagha n'ụlọ na ụgwọ ọnụahịa, ọnụ ahịa nri, ma belata ọnụ ọgụgụ nke ndị obodo ebe ha na-eme mkpọtụ mgbe nile. Na Iceland, na nnukwu mmụba na njem etinyewo nsogbu dị egwu na akụrụngwa, nakwa dị ka nke na-eduba n'ọbawanye dị ukwuu na ego nke ndụ maka ndị obodo.
Ụda ụda-ndị na-arịa ọrịa ogbi
Otú ọ dị, nanị n'akụkụ njem nlegharị anya, ọ bụ ihe dị nkenke na ọ na-agba ọbara anyị n'ezoghị ọnụ.
Ị hụla ya.
Anyị ahụla ya.
Mgbe ị na-akụtu nri nri Instagram gị na ịchọta ụfọdụ "influencer" nke dị na mba 3rd-ụwa, na-etinye onye nkwado ha na ihe mere ị ga-eji "eyi" n'oge ọzọ ị nọ n'ime ụlọ a na-agha obodo agha. Ọ na-agwụ ike, na Instagram na mgbasa ozi ọha mmadụ jupụtara na ya.
Enwere ọrụ dịka onye njem, ma ị nwere olu, ma ị nwere ma ọ bụ na i nweghị blog, ọ bụ ezie na ịrịa nje gị na mgbasa ozi.
Ihe mgbaru ọsọ mbụ dịka onye njem bụ Hippocratic na nyocha anyị. Isi na-enweghị ihe ọ bụla (na Latin: "nke mbụ - emela ihe ọjọọ"), dị ka iyi ahụ na-ekwu. Dị ka onye njem, na ọtụtụ N'ezie dịka onye nwere ọkwa ma ọ bụ ndị na-ege ntị, ibu ibu ọrụ dịịrị gị mgbe eme ka ọnọdụ ahụ ka njọ. Na-ahapụ ebe ka mma karịa ka ịchọtara ya.
Ị bụ vegan? Nke ahụ mara mma. Ọ bụ ụzọ dị mma ị ga - esi bụrụ na m nwere ịdọ aka ná ntị, n'eziokwu. Otú ọ dị, ma eleghị anya ọ dịghị mkpa ka ị gaa n'otu obere obodo dị na Argentina maka ihe ndị ọzọ gbasara Instagram photoshoot, ihe niile-mgbe ị na-arịọ ndị na-ebupụta ebe obibi ha ma ọ bụrụ na ha maara ụlọ oriri ọ bụla na-eri nri. N'aka nke ọzọ - ma eleghị anya, ị bụ onye na-ahụ n'anya? Odi egwu - enweghi ihe kariri ezigbo ogwu. Otú ọ dị, ma eleghị anya, ịchọrọ ịgafe eriri ma ọ bụrụ na ị nọ na Southern India ebe a na-ewere ehi dị ka ihe dị nsọ.
Nke ahụ na-emerụ ahụ. Nke ahụ bụ ụda olu. Ọ dị mfe ịkwanyere omenala obodo ahụ ùgwù, ma kpebie ma ọ bụ ebe ọ ga-adaba na nkwenkwe gị, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ebe ị ga-aga.
Na-eche nche. Mara ntakịrị banyere omenala na nkwenkwe nke ebe ị na-agagharị, ma mee ihe niile ị nwere ike ịkwanyere omenala ndị ahụ kachasị dịịrị ndị bi n'ebe ahụ.
Ọrụ nke Social Media
Site na nke a, usoro mgbasa ozi na-anọgide na-arụ ọrụ nke dị oké mkpa. Njem anyị malitere site n'ike mmụọ nsọ anyị natara site na blọọgụ, dị ka nke anyị. Otu n'ime ihe omuma di oke anyi kpaliri bu nke mere ka obi onye njem ghara idi ya, ma choro na oputara n'ezie inwe mmuo nke wanderlust.
Mgbasa mgbasa ozi nwere ike ịbụ ngwá ọrụ dị mma. Hell, ọbụna Instagram nwere ike ịbụ ngwá ọrụ nke ọma. Ebe n'okpuru ebili mmiri nke onwe-aggrandizing douche-bags bụ ndị na-agbalị ime ka a mara ihe gbasara ọha mmadụ na nsogbu, ndị mmadụ na-agbalị iji usoro ha, n'agbanyeghị obere, iji gbanwee uche n'otu n'otu. Ọ bụrụ na ọ bụ gị? Nọgide na-aga n'ihu.
Echere m na okpukpo ahụ "na-agbagha azụ". Echere m na ọ na-amalite ọbụna. Amaara m na ọtụtụ ndị ọzọ na-etinye mmetụta dị nta na Instagram, ma ọ bụ na-agbanwe usoro ha niile-ọnụ ma ọ bụ na-achọghị mgbasa ozi ọha mmadụ ma ọ bụ na-ekwupụta ụdị nkwenye zuru oke. Ọ dịghị nke abụọ na-ewe, ọ dịghị mmụba, mgbe niile. Ndị mmadụ na-amalite na-arịa ọrịa nke bullshit, na-ekwu eziokwu.
Ọ bụ gị? Nọgidenụ na-eme ya. Ụwa chọrọ gị. Njem nleta chọrọ gị.
Mgbasa mgbasa ozi ka nwere ike ime nnukwu ihe. Njem nleta nwere ike iweta ego n'ime ebe kwesịrị ya. N'eziokwu, tupu njem nlegharị anya na-aga n'ihu Iceland, ọ bụ nnukwu ihe kpatara ikike ha nwere iji nwetaghachi ego na 2008. Njem nleta nwere ike ime ka a mata ihe gbasara ikike ụmụ anụmanụ, ahụike gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ enweghị ego.
Ọbụna njem nleta nwere ike idozi nsogbu ndị ahụ, na mgbasa ozi ọha mmadụ nwere ike ịbụ isi ihe kpatara ya.
Tụkwasị na nke a, mgbasa ozi ọha na eze ka nwere ike na-akpali - ma ka eme. Otú ọ dị, gịnị ga-eme ọdịnihu nke mgbasa ozi ọha na eze banyere njem? Ọ ga-eme ka anyị ghara inwe ekele maka ebe ndị dị ịrịba ama n'ezie n'ihi na anyị ahụworị ụdị mbibi nke 1,000 ugboro ugboro na Facebook? Enwere m olileanya na ọ bụghị.
Ma, nke ahụ bụ ibu ọrụ anyị dị ka ndị na-egbu egbu. Anyị ga-enye gị eziokwu banyere ebe, gbasara ndị mmadụ, na igosi gị mmụọ nsọ iji chọpụta ahụmahụ gị.
Gịnị Ka Anyị Pụrụ Ime?
Ekwughị m ndị na - ede blọgụ - M pụtara onye ọ bụla. Gịnị nwere ike we, ndị njem, na-eme iji hụ na mgbasa ozi ọha na eze bụ ngwá ọrụ eji eme ihe ọma, na njem ahụ bụ ihe na-ebute nzube ya iji kpalie, imata, na ịgbasawanye echiche anyị?
Nke mbụ, na nke kachasị mkpa, eme ọ dịghị nsogbu.
Mgbe ị na-eme njem, mee ya n'ụzọ nkwanye ùgwù. Ekwula ụda. Edobala onwe gi anya. Echela ihe kpatara ya. Nwee uche nke mmata.
Mee ihe. Were obere ahịhịa, ọbụna ákwà ntanye, tinye ya na mkpofu. Mepee ụzọ maka ndị nọ ná mba ọzọ - dị, ihe ọ bụla. Atụla anya na a ga-akpọpụ kapeeti na-acha uhie uhie maka gị, mana kama chọọ ohere ije ozi, n'agbanyeghị obere.
Mụta otu esi ekwu biko, Daalụ, ndo, ee, na Ee e na asụsụ nnabata ebe ọ bụla ị na-eme njem.
Echela njem dịka usoro nhazi. Ọ bụghị asọmpi.
Mara banyere omenala na omenala obodo. Ịgaghị etinye aka n'ihe ndị ị kwenyeghị naanị n'ihi na ndị obodo (dịka nkwenkwe okpukpe, ihe oriri, ihe ndị ọzọ ...), ma emela ndị na-eme omenala ndị ahụ iwe.
Na - echeta mgbe niile mbụ, nke abụọ. Emela onwe gị n'ihu ndị mmadụ, ebe, ma ọ bụ omenala nke ebe ị na-aga.
Were foto - ha bụ ihe ncheta kachasị mma ị nwere ike inweta, ha nweere onwe ha! Gwa ha na Instagram, kesaa ha ma ịchọrọ - ma mee ya niile na ezi obi.
K'anyị mara ma ọ bụrụ na anyị atụghị ihe ọ bụla, na ihe echiche gị dị na ebe a. Ekele ndị - na-agagharị n'ike mmụọ nsọ!
Category: Enyemaka mmadụ, omenala, Njem ịde blọgụ Tags: facebook, iceland, instagram, Peru, elekọta mmadụ media, njem
← Otu esi eme njem ọzọ Na 2019
Ebee Ka I Nọrọ na Vienna →
4 Comments na "Nwere Instagram na Social Media mebiri Travel?"
Daalụ maka isiokwu a bara uru. Enweela m otu ụzọ ahụ ogologo oge. Enwere m mmasị na ndụmọdụ gị karịsịa: "echela njem dịka usoro nhazi. Ọ bụghị asọmpi. "Ọ dị ka njem na-aghọ ụdị asọmpi nke ndị na-etinye (ọ bụghị naanị ndị na-ede blọgụ) na-asọ mpi ịga leta ọtụtụ ebe dị ka o kwere mee.
Ma oh dear! Amaghị m na e nwere ndị na-ahọrọ njem ha dabere na "Instagrammability". Afọ ole na ole gara aga ọ dịghị onye ọ bụla maara Instagram ...
Daalụ Joanna - obi ụtọ na ị nwere ya. Echere m na mgbe ụfọdụ, anyị echefuru na ebe niile ị ga-aga bụ ịnweta ahụmahụ ọhụụ, ọ bụghị iji nweta ọnụ ọgụgụ 🙂
Ana m echeta ụbọchị ndị mmadụ na-eme njem ma na-enwe mmasị na nlegharị anya. Mgbasa mgbasa ozi na-emetụta ọtụtụ ndụ anyị ugbu a mana nke ahụ bụ ihe ịrịba ama nke oge.
Enweghị m nnukwu ihe na Instagram n'onwe m mana m ghọtara uru nke ịmepụta ihe na-esonụ site na iji foto na vidiyo dị ka ọdịnaya gị. Ndị mmadụ na-ahụ anya, ọ ga-adọrọ mmasị ha mgbe niile na-egbukepụ egbukepụ, ihe oyiyi na-egbuke egbuke.
Achọpụtara m na ị nwere ike izere Instagramers site na ịga na obodo 2nd nke na-apụ n'okporo ụzọ a kụgburu. Ị ga-ahụ ndị njem nleta ole na ole na ndị mmadụ na-ajụ maka igwefoto.
Sigh. Ọ dị mma, m ga-echeta mgbe niile ihe ọma na 'ụbọchị mgbe m na-ese foto foto m kamera skool Kodak ngwa ngwa. Lee ihe ncheta a!
Kwekọrịta - ka na - eme ka ọ dịkwuo mkpa ịhụ ihe ị chọrọ ịhụ, n'agbanyeghị agbanye ùgwù nke ebe. 🙂